Fahadiovana ao Mahajanga : “Mila manova fomba”, hoy ny ben’ny Tanàna | NewsMada
Fahadiovana ao Mahajanga : “Mila manova fomba”, hoy ny ben’ny Tanàna
Sarotiny amin’ny fahadiovana. Ahafantarana indrindra ny ben’ny Tanànan’i Mahajanga, Andriatomanga Mohktar Salim, izany. Tsy mametraka paikady sy mandrindra ny asa fotsiny, fa mirotsaka an-tsehatra mitarika ny vahoaka amin’ny fanadiovana mihitsy izy sy ny mpiara-miasa aminy, isaky ny zoma maraina.
Omaly, nitondra kifafa nanadio ny lalana lehibe mihazo an’i Fiofio, i Morafeno, i Mahabibokely ary Ambalavola izy ireo. “Efa herinandro enina teo ho eo izay no nanaovanay izany fanadiovana miendrika fanentanana izany. Mila manova ny fomba fanao ny tsirairay mba tsy handoto ary hahay hanadio ka aleo manome ohatra mihitsy ny ben’ny Tanàna, handonana ny hambompon’ny tsirairay. Ny mahafaly, efa maro izao ireo fikambanana isan-karazany miara-dia aminay, manatontosa izany fanadiovana izany”, hoy ny nambaran’ny ben’ny Tanàna.
Anisan’ireo niara-dia tamin’ny ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa azy, omaly, ny ekipan’ny “Star Tour”. Manatontosa hetsika goavana eto Mahajanga izy ireo ka mahatsapa fa manana andraikitra ihany koa amin’izany fanadiovana izany. “Fanamafisana ilay fiaraha-miasa eo aminay sy ny kaominin’i Mahajanga izany. Anisan’ny fifanarahana lehibe ao anatin’ny fanatontosana ity fetim-pianakaviana ity ny fanentanana mba tsy handoto sy ny fanadiovana. Fanombohana ihany iny, fa mbola hisy ny fanadiovana aorian’ny fety, ankoatra ilay fifaninanana manadio ny torapasika, izay hanoloranay loka”, hoy kosa ny nambaran-dRazafindrakoto Karine, tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny orinasa Star.
Anisan’ny tena iantefan’ny fanentanana ireo mpiala sasatra avy any Antananarivo sy ireo faritra manodidina, izay marobe no misafidy an’i Mahajanga amin’izao fotoana izao.